မြန်မာတွေဟာ ကမာ္ဘမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မချမ်းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မြန်မာတွေဟာ ကမာ္ဘမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်သလောက် မချမ်းသာဘူး။ အဲဒါ ဘယ်အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ???
Posted by POL on May 18, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ကြတဲ့အခါ ဘယ်အလုပ် လုပ်သလဲလို့ မေးမြန်းနှုတ်ဆက်တတ်ပါတယ်။ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရက်နဲ့ စီးပွါးရေး အလုပ်တစ်ခုမှ မလုပ်တဲ့သူကို လူရာမဝင်သူလို့ သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်သူမှ အပေါင်းအသင်း မလုပ်ကြပါဘူးလို့ အားရပါးရ ပြန်ပြောတယ်။
အင်း ဒီထဲမှာ တင်ပြီးသားပါ။
ကော်ပီတော့ ကော်ပီပဲ.. ကော်ပီ အရင်တင်ထားသူက ဆူး ဖြစ်နေတယ်။
နေဝန်းနီ ရဲ ့ဆင်ရဲရခြင်အကြောင်းများ မှာလဲ ဒီလိုဖတ်ဖူးလို့မှတ်သားထားဖူးပါတယ်
တရုတ်လိုရှာ … ကုလားလိုစု.. မြန်မာလို မသုံးနဲ့ တဲ့ ။
ဘင်ဂျမင်ဖရန့်ကလင်း ရဲ့ စကားကိုပြန်သုံးရရင်…မှတ်ထားရမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။
၂။ဝီရိယ အားဆိုက်မူ ငွေကိုမဖြုန်းတီးနဲ့၊အချိန်ကိုမဖြုန်းတီးနဲ့ နှစ်ခုစလုံးကို တန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချပါ။
ရိုးရိုးသားသားရှာနိုင်သမျှရအောင်ရှာပါ။မသုံးမဖြစ် သုံးစရာတွေကလွဲလို့ကျန်တဲ့ ရသမျှတွေကို စုဆောင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို မုချ ချမ်းသာမှာပဲ။
မြန်မာအများစု မကြီးပွားရခြင်းအကြောင်းကတော့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို စနစ်ကျနစွာဖြင့် အရည်အချင်းရှိရှိ ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူ တစ်ခါမှ မပေါ်ဖူးဘူးသေးလို့ပါ။
မှတ်သားဖို့ ကောင်းတဲ့ စာစုလေး တစ်ခုပါ…
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်မြန်မာပြည်၏တိုးတက်မှုအကြောင်းရေးမလို့ ဒီpost တက်လာတာနဲ့အတော်ပဲ၊ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်၊ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ….(အကျဉ်းချုပ် ဖြေလိုက်တာက မြန်မာတွေဟာ ဗုဒ္ဓစကားကို နားမထောင်ကြလို့ ဆင်းရဲနေကြတာ)….
ဘုရားမှာတောင်ထီးခိုး ဖိနပ်ခိုး ၅ပါးသီလ လုံသူတွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ၊ လူလည် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ သာဓုခေါ်ရင်တဝက်ရတယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်လှူတာနဲပြီး အလှူတွေမှာသာဓုချဉ်းလိုက်ခေါ်ပြီး တဝက်လိုက်ယူနေကြတာပဲ၊ သာဓုခေါ်လို့တဝက်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်အမြင်ကတော့ ….
လှူတဲ့သူကတကယ့်သဒ္ဒါတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီး သာဓုခေါ်တဲ့သူက တကယ့်သဒ္ဒါတရားနဲ့ပြည့်စုံရင် လှူတဲ့သူကဘုရင်ဖြစ်ရင် သာဓုခေါ်တဲ့သူတွေက သူ့ရဲ့မူးမတ်ပညာရှိဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ သာဓုတောင်မခေါ်တဲ့သူတွေကတော့အလုပ်အကိုင်တောင် ရှာမရဖြစ်တတ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ပို့စ် တင်တဲ့သူကော… ရွာထဲမှာ ပြန်ပြောပြသူနှစ်ယောက်စလုံးကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကျုပ်တို့ မြန်မာများက နှစ်ထပ်ရှိမှ မှတ်မိတာဗျ…
ကဲ..ရွာသူ..ရွာသား အပေါင်းတို့ …သိတော့သိပြီ……